Inqubomgomo Policy2 - Besca Industrial Co., Ltd.
On-https: // www.bescatray.com (kusukela manje kuqhubeke, izobizwa ngokuthi bescatray.com), ubumfihlo isivakashi emkhathaza zethu ezingathí sina. Leli khasi Ingqubomgomo yobumfihlo uchaza ukuthi uluphi ulwazi lomuntu siqu ingase wathola futhi eqoqwe yinoma bescatray.com nokuthi lwazi luzosetshenziselwa.
Ukucinga Engine Izikhangiso
kwamanye amasayithi Njengoba abaningi abangochwepheshe, bescatray.com ukutshala phezu isikhangiso inthanethi. Zethu ukukhangisa abalingani zihlanganisa Izikhangiso bing (Yahoo Izikhangiso). Ukuze wengeze inthanethi ukukhangisa RIO futhi ukuthola target amaklayenti, bescatray.com isicelo amakhodi kokulandela eyenziwe labo izinjini ukuze uqophe IPS umsebenzisi nekhasi wokubuka notshwala.
Isilawuli Sokuxhunyanwa nabo Idatha
Siqoqa lonke ibhizinisi idatha yothintana naye wathumela ama-imeyili noma amafomu ewebhu ku bescatray.com kusukela kubavakashi. Isivakashi ukuhlonza kanye nemininingwane ezihlobene idatha efakiwe izogcinwa yenzelwe bescatray.com alisebenzisile yangaphakathi. bescatray.com kuzoqinisekisa ukuphepha ukusetshenziswa ofanele ngalabo idatha.
Sizosebenzisa ulwazi lwakho okhonjwa njengoba kuchaziwe ngezansi, ngaphandle kokuthi ngokuqondile wavuma kolunye uhlobo ukusetshenziswa, noma ngesikhathi ulwazi okhonjwa eqoqwe kuwe noma ngokusebenzisa ezinye uhlobo imvume kuwe:
1.We izosebenzisa ulwazi okhonjwa ukuqedela yimuphi oda ubeke.
2.We izosebenzisa ulwazi okhonjwa ukukunikeza amasevisi athile ukuthi ucele, ezifana ukufinyelela umthengisi.
3.We izosebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu olubonakalayo ukuphendula imibuzo okuthula kithi.
4.We izosebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu olubonakalayo ukukuthumela ama-imeyili ngezikhathi ezithile, njenge-newsletter nezaziso mayelana ukukhushulwa zethu.
5.We ingaveza imininingwane okhonjwa njengoba kudingwa umthetho noma inqubo yomthetho.
6.We ingaveza imininingwane okhonjwa ukuphenya yezinsolo zokukhwabanisa, ukuhlukunyezwa noma ezinye ukwephula noma yimuphi umthetho, umthetho noma umthethonqubo, noma imigomo noma izinqubomgomo le ngosi.
Ukuphuma / nokulungiswa
Lapho isicelo sakho, siyakufa (a) ukulungisa noma ubuyekeze ulwazi lwakho lomuntu siqu; (b) ukumisa ukuthumela ama-imeyili lakho le-imeyili; kanye / noma (c) ukuvala i-akhawunti yakho ukuze uvimbele noma yikuphi ukuthenga esizayo ngaleyo akhawunti. Ungenza lezi zicelo at ulwazi ikhasimende kwesigaba, noma ngokubashayela ucingo, noma uthumele i-imeyili umnyango Ukusekela Amakhasimende isicelo sakho bescatray.com nganoma candy@bescatray.com. Sicela musa imeyli inombolo yakho yekhadi lesikweletu noma olunye ulwazi olubucayi.